Zviuru makumi maviri zvematani toni yemuchina wekugadzira fureni - YiZheng Heavy Machinery Co, Ltd.
Iyo yegore yekugadzira tambo yemakumi maviri emakumi matani efoni yemubatanidzwa mubatanidzwa wemhando yepamusoro zvigadzirwa Low kugadzirwa mutengo uye yakakwirira kugadzirwa kunyatsoshanda. Remubatanidzwa fetiraiza yekugadzira mutsara inogona kushandiswa kune granulation yezvinhu zvakasiyana siyana zvinoumbwa mbichana. Chekupedzisira, komputa yemanyowa ine huwandu hwakasiyana uye mafomula inogona kugadzirirwa zvinoenderana nezvinodiwa, kunyatsozadza zvinovaka muviri zvinodikanwa nezvirimwa, uye kugadzirisa kupokana kuri pakati pekudiwa kwezvirimwa nekuwanikwa kwevhu.
Musanganiswa wekugadzira fetereza unogona kuburitsa yakakwira, yepakati uye yakadzika yakakomberedzwa fotereza yezvirimwa zvakasiyana. Iyo yekugadzira tambo haidi kuti iome, iine diki yekudyara uye yakaderera simba rekushandisa
Iyo roller yeiyo inosanganiswa fetiraiza yekugadzira mutsara inogona kugadzirirwa kuita akasiyana maumbirwo uye hukuru kusvina uye kuburitsa zvidimbu zvehukuru hwakasiyana.
1.Composite fetereza yekugadzira mutsara ine hunhu hwesimba simba rekushandisa, hombe yekugadzira kugona uye zvakanaka hupfumi mabhenefiti.
2. Iyo yekugadzira tambo inotora yakaoma granulation, kubvisa iyo yekuomesa kutonhodza maitiro uye zvakanyanya kudzikisa mutengo wekuisa wemidziyo.
3. Mutsara wekugadzira fetiraiza wakabatana uye unonzwisisika, unofukidza nzvimbo diki.
4. Mukugadzirwa kwekugadzira, pane shoma simba rekushandisa uye hapana matatu marara. Iyo inoumba manyowa ekugadzira mutsara ane kugadzikana kuita, hwakavimbika mhando uye hwakareba hupenyu hwebasa.
5. Mutsara wekugadzira fetiraiza unogadzirwa unogona kushandiswa kugadzira akasiyana macomputer fetiraiza mbishi zvinhu. Uye iyo granulation rate yakakwira zvakakwana.
6. Mutsara wekugadzira fetiraiza unoburitsa unogona kugadzira fetereza yemubatanidzwa pazvikamu zvakasiyana kusangana nezvinodiwa nevatengi vakasiyana.
Kazhinji kutaura, iyo inoumba manyowa yekugadzira mutsetse kazhinji unosanganisira anotevera zvikamu: kusanganisa maitiro, granulation maitiro, kupwanya maitiro, kuongorora maitiro, kupfeka maitiro uye kurongedza maitiro.
Izvo zvinongedzo zvezvinhu zvinodarika zvitatu zvinogona kuitwa. Mushini wekucheka une anopfuura matatu masilosi, uye anogona nenzira kwayo kuwedzera uye kudzikisa silo maererano nezvinodiwa nevatengi. Panobuda siro yega yega, pane pneumatic gonhi remagetsi. Pasi peiro, inonzi hopper, zvinoreva kuti pasi payo hopper ibhandi rinotakura. Izvo zvinonzi iyo hopper uye bhandi rinotakura rakasungirirwa pamucheto mumwe wekutakura lever, imwe mugumo weiyo lever yakabatana neiyo tension sensor, uye iyo sensor uye pneumatic control chikamu chakabatana nekombuta. Muchina uyu unotora iyo inorema kuyera kwezviyero zvemagetsi, izvo zvinodzorwa otomatiki neabatch controller, uye huremu hwehuremu hwechinhu chega chega hunopera. Iine zvakanakira chimiro chakareruka, yakakwira ingredient kunyatso, kushanda kuri nyore uye kushandiswa kwakavimbika.
Sanganisa zvinhu zvakasiyana zvinoumbwa mune chimwe chikamu uye uzviise mune yakatwasuka cheni crusher. Iyo mbishi zvinhu zvichapwanywa kuita zvidimbu zvidiki kusangana nezvinodiwa zvinotevera granulation maitiro.
Mushure mokunge mbichana yapwanywa, inotumirwa kuVertical disc feeder, uye iyo mbishi yakasanganiswa uye inomutswa zvakaenzana mumusanganisi. Iyo yemukati lining yemusanganisi ipolypropylene kana isina simbi ndiro. Kwakadai mbishi zvinhu zvine yakakwira ngura uye viscosity hazvisi nyore kunamatira. Izvo zvakasanganiswa zvinhu zvinopinda mudhiramu granulator.
4. Rongedza Kuwedzera Granulator:
Kugamuchira yakaoma extrusion tekinoroji, iyo yekuomesa maitiro haina kusiiwa. Inonyanya kuvimba nekumanikidza kwekunze, zvekuti zvinhu zvinomanikidzwa kumanikidzwa kuita zvidimbu kuburikidza nemaviri marevhuru anotenderera. Iyo chaiyo density yeicho chinhu inogona kuwedzera ne 1.5-3 times, nokudaro ichisvika kune imwe nhanho yesimba. Kunyanya inokodzera nzvimbo dzekuwedzera icho chigadzirwa stack uremu. Iko kushanda kwekusimba uye huwandu hwakawanda hwekugadzirisa hunogona kugadziriswa nekumanikidza kwemvura. Iyo michina haisi yesainzi chete uye inonzwisisika muchimiro, asi zvakare ine diki yekudyara, inokurumidza kukanganisa uye zvakanaka hupfumi mabhenefiti.
5. Michina Drum Screene:
Inonyanya kushandiswa kupatsanura chigadzirwa chakapedzwa kubva kuchinhu chakadzokororwa. Mushure mekusiya, zvinokwanisika zvidimbu zvinopihwa muchiputira muchina, uye zvisina kukodzera zvidimbu zvinopihwa mukati meiyo yakatwasuka cheni crusher kuti iite granulated zvakare, nekudaro ichiziva chigadzirwa kupatsanura uye yunifomu kupatsanura kwezvakapedzwa zvigadzirwa. Mushini unotora skrini yakasanganiswa kuitira nyore kugadzirisa uye kutsiva. Chimiro chayo chiri nyore uye chakakwenenzverwa. Inoshanda uye yakatsiga mashandiro chinhu chakakosha michina mukugadzira fetiraiza.
6.Magetsi Ehuwandu Kupakata Muchina:
Mushure mekunge ma particles aongororwa, anoiswa mukati nemuchina wekurongedza. Mushonga wekupakata une dhigirii yakakura yekushandisa, kusanganisa kuyera, suture, kurongedza uye kutakura, izvo zvinoona kukurumidza kuwanda kwepakeji uye zvinoita kuti iko kurongedza kuve kwakanyatsoita uye kwakarurama.
7. Bhandi rinotakura: